An'arivony no nandidy ny hamindra ny nosy Vanuatu satria volkano nandrahona ny hitsoka
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » An'arivony no nandidy ny hamindra ny nosy Vanuatu satria volkano nandrahona ny hitsoka
Olona 11,000 no nasaina namindra toerana tamin'ny nosy iray tao Vanuatu izay misy volkano mikotrana atahorana hipoaka.
Nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra ao amin'ny nosin'i Pasifika fa tsy afaka manao vivery ny ain'ny olona izy ireo ka nasainy nafindra tany amin'ny nosy Ambae.
Ambae dia iray amin'ireo nosy monina manodidina ny 65 ao amin'ny firenena Pasifika tokony ho ny ampahefatry ny lalana avy any Aostralia ka hatrany Hawaii.
Nanangana ny refin'ny hetsika ny volkano tamin'ny haavo efatra tamin'ny faran'ny herinandro, tamin'ny ambaratonga izay nanehoan'ny ambaratonga dimy fipoahana lehibe. Tamin'ny alatsinainy dia nanambara ny hamehana ireo tompon'andraikitra ary namindra ireo olona akaikin'ny volkano tamin'ny faritra hafa amin'ilay nosy.
Ny tafik'i Nouvelle-Zélande dia nanidina teny ambonin'ny volkano tamin'ny talata ary nilaza fa setroka lehibe, setroka ary vatolampy volkano no nirohondrohona avy tao amin'ilay lava-bato.
Ny mponina sasany dia efa nandao an-tsitrapo ny nosy. Nilaza ny tompon'andraikitra fa tsy manana fomba tena maminavina izay hataon'ny volkano manaraka izy ireo ary tokony hiandry izany ireo evacuees.
Ny mpitondra tenin'ny governemanta Hilaire Bule dia nilaza fa ny famindra toerana dia hatao amin'ny sambo ary hitohy hatramin'ny 6 Oktobra. Nilaza izy fa hafindra any amin'ireo nosy akaiky ny mponina. Nametraka tranokala roa ao amin'ny nosy Pentecost ny tompon'andraikitra, hoy izy, izay toerana ipetrahan'ny evacue ao amin'ny tranom-panjakana na amin'ny toby vonjimaika.
Dickinson Tevi, mpitondra tenin'ny Fikambanana Vokovoko Mena Vanuatu, dia nilaza fa ny masoivohon'ny fanampiana dia nandefa rano sy fitaovana fialofana tany amin'ny nosy Ambae.
"Matahotra mafy ny vahoaka noho ny feon'ny fikotrokotroka," hoy izy. “Tena tsy azo antoka sy matahotra izy ireo.”
Nilaza i Bule fa nanokana vola mitentina 200m $ (1.9 tapitrisa dolara) ny governemanta hanatanterahana ny asa famindrana olona ary manaparitaka polisy 60 hanampiana ny olona hiala ary hiantohana fa tsy misy fandrobana.
"Niomana amin'ny cyclone izahay tamin'ny fametrahana ireo ivom-pialokalofana eto amin'ny nosy fa tsy vonona ny hipoaka volkano izahay," hoy i Bule. "Tokony hametraka politika ny governemanta mba hikarakarana izany amin'ny ho avy."
Vanuatu dia fonenan'ny olona 280,000 ary mora iharan'ny loza voajanahary, miaraka amin'ny volkano mavitrika am-polony ary koa sikilona sy horohoron-tany mahazatra. Mipetraka eo amin'ny “faribolana afo” any Pasifika izy io, ilay tohin'ny hadisoana maneno manodidina ny Oseana Pasifika izay misy horohoron-tany sy volkano.
Seychelles dia mandray ny sidina charter avy any Tianjin, Sina
Manohana serivisy an'habakabaka St. Thomas ny FAA